Izindlela zokubuyisa iselula yethu elahlekile ye-Android | Izindaba zamagajethi
Ungayibuyisa kanjani ifoni yakho elahlekile ye-Android
Nganoma yisiphi isikhathi lesi simo singehlela, okungukuthi, lelo pnoma ukwengamela okuncane umakhalekhukhwini we-Android ulahlekile, okuthile okungenzeka kwenzeke ngisho nasendlini yethu kepha singazi indawo ngqo esiyishiye kuyo.
Kunenombolo enkulu yezinhlelo zokusebenza kuwebhu esingazisebenzisa ukuzama ukwazi indawo ngqo ekuyo iphi ifoni yethu ephathekayo ye-Android, kunamathuluzi ambalwa akhokhelwayo kanti amanye amahhala. Kulesi sihloko sizokhuluma ngezimbili zazo, zombili ezizosetshenziswa mahhala ngokuphelele, yize kukhona umehluko othile okufanele ucatshangwe ngaphambi kokusebenzisa noma iyiphi yazo.
1 Okokuqala okunye ukuthola lapho kutholakala khona ifoni yethu ephathekayo ye-Android
2 Enye indlela yesibili yokuthola ifoni yethu ephathekayo elahlekile ye-Android
Okokuqala okunye ukuthola lapho kutholakala khona ifoni yethu ephathekayo ye-Android
Kuzona zombili iziphakamiso esizinikeza kulesi sihloko, sizozixhasa ekusebenziseni uhlelo oluthile, okuzofanele sililande esitolo se-Google sokudlala. Lapho leli phuzu selicacisiwe, sizokwenza njalo Ncoma njengenye indlela yokuqala yoHlelo B, ithuluzi ongalilanda ngokuphelele esitolo.
Yize ukusetshenziswa kulula njengoba besicabanga, ithuluzi lingaba isetshenziswe kuphela ohlelweni lokusebenza lwe-Android 2.3 Gingerbread esiphezulu (kunokuhambisana okuthile ne-Android 2.0); kepha ngasiphi isizathu leli thuluzi lisebenza kuphela nge-Gingerbread? Ngokusho kukanjiniyela, amasistimu asebenza kakhulu we-Android aswele amathuluzi athile, ngakolunye uhlangothi, uma i-Android 2.3 inawo, asetshenziselwa ukufaka ukude kuselula elahlekile, ezosebenzela umsebenzisi ne-opharetha, ukuze unolwazi Imininingwane ethile mayelana nokuthi ikuphi ifoni yakho ephathekayo.
Manje, lesi simo singaba wusizo olukhulu kulabo abanalo lolu hlelo lokusebenza, yize kucatshangelwa ukuthi iningi labasebenzisi njengamanje linamadivayisi eselula adlula i-Android 4.0, ithuluzi ngeke nje lisebenze kulowo mathuluzi; Ngalesi sizathu, sizoncoma enye indlela lapho sizama ukuthola ifoni yethu ephathekayo ye-Android.
Enye indlela yesibili yokuthola ifoni yethu ephathekayo elahlekile ye-Android
Sizophinda futhi sincike kwisicelo, esinegama le- I-Android Lost; Ukuze sisebenzise leli thuluzi, kufanele siqale sibhalise kusiza sayo esisemthethweni (isixhumanisi sayo esisishiya ekugcineni kwendatshana). Indlela yokubuyisa umakhalekhukhwini wethu olahlekile yile usebenzisa idivaysi ehlukile engahle ibe yithebhulethi noma enye ifoni ephathekayo ene-Android operating system. Kusuka kuleli qembu sizoba nethuba lokuzulazula ngemisebenzi ehlukahlukene umhlinzeki asethulela yona, kuwebhusayithi yalo esemthethweni.
Kungashiwo ukuthi leli thuluzi yilona eliphelele kunawo wonke amathuluzi wamahhala akhona namuhla, ngoba uma umakhalekhukhwini wethu ulahlekile, singakwazi ukwazi ukuthi ukuphi ngemisebenzi yawo ehlukene; Kumele kuqashelwe ngaphambili ukuthi uma umakhalekhukhwini ungekho ezandleni zethu, kufanele siqale ngokuthumela umyalezo we-SMS ukuze siwuvulele ukusesha kwethu, into esebenza njengomyalo okude futhi ichazwe ngale ndlela elandelayo:
Nge-alamu ekude. Kusuka kudivayisi ehlukile esinayo ezandleni zethu, singakwazi ngisho noku-oda i-alamu ezwakalayo ukuthi yenziwe isebenze futhi nokudlidliza (isikrini futhi siyakhanya) kuselula yethu ye-Android. Lokhu kungasisiza ukuthi siyithole uma isendlini yethu noma ngokumane, sesabise umenzi wobubi oyikhiphile.
Indawo emephini. Lokhu kungenye yosizo oluhamba phambili, ngoba uma umakhalekhukhwini ungaphandle kwekhaya noma ehhovisi lethu, singamane senze kusebenze le nketho ukwazi indawo ngqo lapho ikhona, sisebenzisa iGoogle Maps.
Ukuthumela umlayezo we-SMS ovela ku-PC. Njengoba ikhasi lewebhu liyindawo lapho sibhalise khona nge-Android Lost, kusuka kwi-PC ejwayelekile singathumela umlayezo we-SMS kumakhalekhukhwini wethu olahlekile, uma kwenzeka sibheka ukuthi umuntu ophethe ezandleni zakhe, uzowubuyisa kuthina.
Khiya ifoni. Uma singakwazi ukuthola ngokushesha ifoni yethu ephathekayo ye-Android, singayivimba kusuka kwenye idivayisi. Umakhalekhukhwini olahlekile uzocima, ukhombisa isikrini esikhiyiwe bese kwazisa ukuthi kufakwe iphasiwedi uma ivuliwe.
Sula okuqukethwe kolwazi. Uma sinemininingwane ebalulekile kwimemori yangaphakathi noma yangaphandle ye-micro SD, singayisusa futhi ukude ukuvimbela umuntu ukuthi ayisebenzise kabi.
Kunemisebenzi eminingi ongayisebenzisa kunoma iyiphi yalezi zinketho ezimbili esesizishilo, yize kufanele uhlale ucabangela ukuhambisana kwalamathuluzi ngamunye ngezinhlobo ezahlukahlukene zohlelo lokusebenza lwe-Android ezikhona njengamanje.
Imininingwane engaphezulu - Izicelo ukuthola Mobiles elahlekile
Imithombo - Hlela B, I-Android ilahlekile, Iwebhu elahlekile ye-Android
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungayibuyisa kanjani ifoni yakho elahlekile ye-Android
Ungazivivinya kanjani izici ezintsha ze-KitKat Android 4.4 ku-Windows
Ungamisa kanjani ukukhipha i-Recycle Bin ku-Windows